သတင်း - လက်ပတ်ကြိုးပါသည့် ဘယ်ညာ NEON JOYCON pad controller
1. ပြီးပြည့်စုံသော လိုက်ဖက်ညီမှု- Nintendo Switch အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်- Switch Joycon အတွက် စံပြ အစားထိုးမှု၊မူလ Joy-con ခလုတ်များ အတူတူ၊လက်ကိုင်မုဒ်တွင် အသုံးပြုရန် လက်တစ်ဖက်စီကို သီးခြားလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကွန်ဆိုးလ်နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ခြစ်ရာဒဏ်ခံပြီး စလစ်မကပ်ဘဲ တာရှည်ခံ ABS ပစ္စည်း။Ergonomically သက်တောင့်သက်သာရှိသော Neon Blue နှင့် Neon Red Joy Pads။
2. ဆန်းသစ်သော တိကျမှုရှိသော ထိန်းချုပ်မှုဒီဇိုင်း- ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုစီတွင် သီးခြားထိန်းချုပ်ကိရိယာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည့် ခလုတ်အစုံအလင်ရှိပြီး ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုစီတွင် အရှိန်နှင့်ဘယ်ညာ လှုပ်ရှားမှုများကို လွတ်လပ်စွာထိန်းချုပ်နိုင်စေရန် အရှိန်မြှင့်ကိရိယာနှင့် gyroscope အာရုံခံကိရိယာပါရှိသည်။ချိန်ရွယ်ပြီး တိကျစွာ ပစ်ခတ်ပါ။
3. လူသားဆန်ပြီး လျင်မြန်စွာ လိုက်ဖက်ညီမှု- ဘက်စုံသုံး ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ကစားသမားများအား ကစားရန် အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ နည်းလမ်းများစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ဘလူးတုသ်ကြိုးမဲ့/ကြိုးတပ်ချိတ်ဆက်မှု၊ တည်ငြိမ်သောအချက်ပြမှု။အလိုအလျောက်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှု;အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် တုန်ခါမှုမရှိဘဲ ဂိမ်းကစားသည့်အခါ 10 နာရီ၊ 20 နာရီခန့်၊ကွန်ဆိုးလ် သို့မဟုတ် mirco usb မှတဆင့် အားသွင်းပါ။
(1) ၎င်းသည် 3rd Party Joy-con အတွက် စံပြအစားထိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
(2) NFC (amiibo) သို့မဟုတ် IR Motion မရှိပါ။
(၃) အခွံ သို့မဟုတ် လက်ကိုင်အတွက် မသင့်လျော်ပါ။
(4) Nintendo သည် ကွန်ဆိုးလ်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်သောအခါ၊ လက်ကိုင်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် PC သို့ ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သည်။
· သက်တောင့်သက်သာရှိသော နီယွန်အပြာနှင့် နီယွန်အနီရောင် Joy Pads
· သူငယ်ချင်းများနှင့် မျှဝေပြီး ပံ့ပိုးပေးထားသော ဂိမ်းများတွင် လူနှစ်ဦး၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ခံစားပါ။
· ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုစီတွင် သီးခြားထိန်းချုပ်ကိရိယာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည့် ခလုတ်အစုံအလင်ရှိသည်။
· Joy Cons အစားထိုးအဖြစ် Nintendo Switch နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ရန် သင်၏လက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ကွေးပါ။
· dual vibration နှင့် motion control သည် ဂိမ်းကို ပိုမိုစွဲလန်းစေသည်။သင်သည် ဒေါင်လိုက် သို့မဟုတ် အလျားလိုက်ကစားသည်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့သည် အရည်အချင်းပြည့်မီဆဲဖြစ်သည်။